मोदीले पाँच सय र हजारको नोट खारेज गर्दा यी बालकले पाए नयाँ जीवन ! – ZoomNP
मोदीले पाँच सय र हजारको नोट खारेज गर्दा यी बालकले पाए नयाँ जीवन ! प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक २९, २०७३ समय - २३:५९:०६ यूपी, २९ कात्तिक । पाँच सय र हजार रुपैयाँको नोट खारेज गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयबाट उत्तर प्रदेशको एक परिवारले चामत्कारिक लाभ पाएको छ ।
वाराणसीमा ९ कक्षामा अध्ययनरत १४ वर्षीय किशोर संकल्प मिश्राको मंगलबार अपहरण भएको थियो । उनी स्थानीय विद्यालयका अवकाशप्राप्त प्रिन्सिपल मंगलाप्रसाद मिश्राका नाती र औषधि व्यापारी देवेन्द्र मिश्राका छोरा हुन् । मंगलबार साँझ संकल्प साइकलमा साथीको घर जाँदै थिए । त्यसैक्रममा अज्ञात समूहले उनको अपहरण गर्‍यो ।
तर मिश्रा परिवारको सौभाग्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मध्यरातमा संबोधन गर्दै पाँच सय र हजार दरका भारु नोट खारेजीको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणाले किडन्यापरहरुलाई यस्तो संकट पर्‍यो कि पैसा लिनै नमिल्ने भयो । लिगौँ भने नचल्ने नोट के लिनु ? त्यसपछि अपहरणकर्ताले ति बालकलाई सार्वजनिक स्थानमा छाडेर भागेको दैनिक भाष्करमा खबर छ ।
त्यसपछि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका बालकलाई प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगायो ।
आफ्नो छोरालाई सकुशल फिर्ता पाएपछि देवेन्द्र भन्छन्, ‘मेरो छोरो सकुशल फिर्ता आयो । यसका लागि भगवानसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।’ कालो धन नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको यो निर्णयको पहिलो लाभार्थी नै आफू भएको उनको दावी छ ।